कोरोना माहामारीमा कसरी होला कांग्रेसको महाधिवेशन ? - Samadarshi Sanchar
कोरोना माहामारीमा कसरी होला कांग्रेसको महाधिवेशन ?
, बिहिबार, १८ भदौ, २०७७, दिउँसोको ०३:२० बजे
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई पार्टीको १४ औं महाधिवेशन के होला भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
१३ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गरेको कांग्रेसले फागुन ७–१० गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ ।
तर महाधिवेशनको कार्यतालिका दुई पटक संशोधन गरिसकेको कांग्रेसले पछिल्लो पटक संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम गर्न सकेको छैन । केही जिल्लामा अन्तरिम संरचना बनेको छैन र तराई मधेसका साथै पहाडका धेरै जिल्लाले कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसक्ने मौखिक जानकारी पार्टी केन्द्रीय समितिलाई दिइसकेका छन् ।
र, अधिकांश नेता कार्यकर्ताले पनि फागुनमा अधिवेशन नहुने कुरा स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भन्छन्, ‘आजको दिन हामी ठोकुवा गरेर के भन्न सक्छौं भने कोभिड जुन रुपमा रहेपनि आउने फागुन मात्र होइन, वैशाख जेठसम्म पनि सरकारले भिडभाड नगरौं, २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइँदैन भन्छ । हामी भएपनि भन्थ्यौं । त्यसैले हामीले महाधिवेशन गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ ।’
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले त फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना देख्न छाडेको बताए । कतिपय जिल्लामा अन्तरिम संरचना नै बन्न बाँकी रहेको, कतिपय जिल्ला समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण नथालेको जस्ता समस्या रहेको भन्दै उनले भने, ‘फागुनमा महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय नेतृत्व तत्पर छ भन्ने विश्वास लाग्न पनि छाडिसक्यो ।’ त्यसलाई तत्काल नसच्याउने हो भने २०७८ सालको जेठमा पनि महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुने सिटौलाले बताए ।
कोरोना महामारी सकिएपछि मात्र महाधिवेशन गरौं भन्ने हो भने अझै ३/४ वर्ष महाधिवेशन नहुने भन्दै उनले भने, ‘त्यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा निर्वाचनमा हुन्छ ।’
भर्चुअल छलफलमा सहभागी उपसभापति निधिले विकेन्द्रीकरणको मोडलका रुपमा नेपाल बार एसोसिएसनको अधिवेशनलाई अघि सारे । उनले भने, ‘जसरी बारको चुनाव हुन्छ, त्यसरी जानुपर्छ कि ? त्यसो गर्दा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्ला जिल्लामा मतदान गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ होला ।’
अरु के छन् विकल्प ?
कांग्रेस नेताहरुबीच २०७८ भदौमा पनि महाधिवेशन नभए के हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल हुन थालेको छ । बन्द कोठामा हुने यस्ता छलफलहरुमा तीन वटा विकल्प चर्चामा छ ।
पहिलो विकल्प : पार्टी एकता
कांग्रेसका पुराना नेता हरिबोल भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस बीपी बनाएका छन् । यदि भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था आयो भने नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस बीपीबीच पार्टी एकता गर्ने र पार्टीको वैधानिकता जोगाउने बाटो समेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एक नेताले बताए ।
दोस्रो विकल्प : संवैधानिक अड्चन फुकाउने
प्रमुख विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि पार्टीको महाधिवेशन गर्न भनेको छ । कांग्रेसले फागुनमा भनेको ठाउँमा उसले चैत भनेको छ । तर उसको पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।
त्यसैले कोरोना महामारीका कारण सम्भव नभएको भनेर संविधान संशोधनबाट अड्चन फुकाउन सकिन्छ । यो भने सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको सहमतिमा भरपर्छ ।
तेस्रो विकल्प : अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार पार्टीको वैधानिकता जोगाउन तत्कालका लागि अहिलेकै नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने र केही समयपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने विकल्प पनि हुनसक्छ । तर यसमा सहमति जुट्न भने त्यति सहज छैन ।